Eeg sida Apple Watch Series 2 cusub biyaha uga saarayo qofka ku hadla | Waxaan ka socdaa mac
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee cusub Apple Watch Taxanaha 2 waa iska caabbinta biyaha waana in hadda la quusin karo loona isticmaali karo isboortiga biyaha ilaa iyo inta laga codsado kaas oo saacadda la hoos galiyay ma ahan mid daran oo waa haddii aad biyo ku tuurto cadaadis haddii ay jidhkaaga ka soo galayso.
Apple ayaa ku soo daabacday bogeeda in meydka Apple Watch cusub dib u habeyn lagu sameeyay si looga dhigo mid aan biyuhu geli karin oo la quusin karo waana mid ka mid ah waxyaabaha Waa inay dib u milicsadaan sameecadda tan iyo dunida maqalka, si ay cod u ahaato, waa inay jirtaa hawo lagu faafiyo.
Tan darteed, Cupertino waxay qaabeeyeen afhayeen cusub oo awood u leh inuu ka saaro biyaha ku jira gudaha ka hor inta uusan bilaabin inuu shaqeeyo. Horaanba Keynote lafteeda waxay ku muujiyeen animation ah sida fikrada ay hirgeliyeen ay ahayd waxayna noqotay dhamaanteen inagoo afka furan. Maalmo kadib waan ogaanay taas Apple wuxuu rukhsad u ahaa fikraddaas waana sida aan wada ognahay, tartanku kama fekerayo wax aan ka ahayn nuqul.
Hagaag, maanta waxa aan dooneyno inaan ku tusno waa fiidiyoow uu isticmaale ka tirsan Apple Watch Series 2 cusub ee aluminium cirro leh uu galiyay shabakadda aan ka arki karno, ee qunyar socodka, sida afhayeenku ugu shaqeeyo cayrinta biyaha gudaha. Sidaad arki karto, waxay isticmaashaa mowjadaha dhawaaqa taas oo ka dhigaysa in xuubku gariiraan oo ah kan biyaha erya.
Shaki la'aan, waa horumar aan arki doonno inta ay qaadanayso noocyada kale in lagu hirgeliyo aaladooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Bal daawo taxanaha cusub ee Apple Watch Series 2 oo biyaha ka cayrinaya afhayeenka